ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးလစာပေးရန် 2018 လမ်းညွှန် | ပျမ်းမျှအားကစား PT ဝင်ငွေ
အဆိုပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး (PT) ၏လစာ is variable, depending on various factors, such as education, location, experience and skill sets. So, how much actually doesaphysical therapist make?
ထိုအဆိုအရ အလုပ်သမားစာရင်းအင်းဗျူရို, အ average pt salary for physical therapist and sports therapist in the United States တစ်နှစ်လျှင် $ 86,520 ဖြစ်ပါသည်, which is XNUMX% higher than the average salary of Americans. The median pay foraphysical therapist is $XNUMX per hour, $XNUMX per week and $XNUMX per month. There is variance within the different disciplines such asadedicated sports physical therapist.
ဤတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးပျမ်းမျှဝင်ငွေ vs ပျမ်းမျှ PT လစာသည်:
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး $41.59 $1,663 $7,210 $86,520
အမျိုးသားဝင်ငွေ $20.45 $818 $3,545 $42,540
2 လစာအကွာအဝေး: certified ရရှိထားပြီး & အကြီးတန်းလစာနှုန်းများ
2.1 လစာစတင်ခြင်း: သင် entry ပေါ်မှာမြျှောလငျ့နိုငျအဘယျသို့
2.2 ထိပ်တန်းပြည်နယ်များပေးဆောင်: အဘယျသို့ဒေသများတွင်အမြင့်ဆုံးလစာများ
2.2.1 Metropolitan Area ကို
2.2.2 Nonmetropolitan ဧရိယာ
3 အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်း: အလုပ်အကိုင်ဒေသများတွင်ပိုပြီးပေးဆောင်ဖွယ်ရှိ
7 မြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေတည်နေရာ key ကိုပေါ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
ကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိယနေ့ရရှိနိုင်မယ့်အချက်အလက်တွေကို၏ကျယ်ပြန့်ငွေပမာဏကိုမှလူတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ကြောင်းနီးပါးဘာမှထွက်ရှာကြပြီးလိုက်ရှာစိတ်ဝင်စားမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်လုပ်ဆောင်သောအလုပ်တာဝန်များကို၏ဖော်ပြချက်ရယူမယ့်တိကျတဲ့တစ်နှစ် projected မည်မျှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အထွက်ရှာတွေ့မှ, လူတွေရှာတွေ့သောသတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရပ်မှန်များကို သိ. စိတ်ဝင်စားလျှင်ထိုကွောငျ့, သူတို့လယ်ပြင်၌တစ်ဒီဂရီရရှိရန်၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်စေမတိုင်မီ၎င်းတို့၏သုတေသနပြုဖြည့်စွက်ဖို့အွန်လိုင်းကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စတင်ရန်, လူအများစုသူတို့အလုပ်လုပ်သောမည်မျှနာရီ, သူတို့ဘာတွေမြင်သောလူနာအမျိုးအစားများ, သူတို့တှငျတှေ့မွငျနိုငျသောပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုသူတို့ကိုကူညီနိုင်မနဲ့အခြားအရာဟာ host သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိခြင်းစိတ်ဝင်စား တစ်ဦးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်မချအတူ။ ဒီကပြောကြားခဲ့သည်ခံနှင့်အတူ, ဤနေရာတွင်အချို့သောမကြာသေးမီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုလစာအချက်အလက်များအကြောင်းအထူးများ၏တချို့ရှိနေပါတယ်။
လစာအကွာအဝေး: certified ရရှိထားပြီး & အကြီးတန်းလစာနှုန်းများ
တစ်ဦးကအသိအမှတ်ပြုသည့် PT တစ်နာရီကို $ 60,600 နှင့်တစ်လလျှင် $ 29.13 ဆိုလိုတာကအနည်းဆုံး $ 5,050 တစ်နှစ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအကြီးတန်းစသည်တို့ကိုတည်နေရာပေါ် မူတည်. $ 120,000 တစ်နှစ်, အတွေ့အကြုံ, ပျမ်းမျှစေနိုင်သည်
လစာစတင်ခြင်း: သင် entry ပေါ်မှာမြျှောလငျ့နိုငျအဘယျသို့
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုအတွက်လစာစတင်ခြင်း .. တစ်ဦးက PT လက်ထောက်နှစ်စဉ် $ 57,220 ဦးရေအများဆုံးပြောင်းရွှေ့ $ 105,900 န်းကျင်၏တစ်ဦးလစာအပေါ်စတင်ရန်မြျှောလငျ့နိုငျတစ်နှစ်လျှင်တစ်ဝှမ်း $ 34,735 ဦးရေအများဆုံးရိုက်တနှစ်လျှင် $ 66,460 ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့လေ့လာမှုများဖြည့်စွက်သည့်အခါသူတို့တည်ရှိပါလိမ့်မည်ရှိရာအချို့သောကိစ္စများတွင်တစ်ဦးချင်းကိုသိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူတို့နေဆဲဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်လျှင်သူတို့ရရှိမည်ဘယ်လောက်သိလိုပေမည်။ ဤအခြေအနေ၌ကရြောကျသောသူတို့အဘို့, သူတို့ကိုနှစ်စဉ်ဝင်ငွေပျှမ်းမျှသောငွေပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီးရရှိခဲ့ကာအနီးစပ်ဆုံးငွေပမာဏကိုပေးနိုငျကွောငျးသတငျးအခကျြရှိသေး၏။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအဘို့နှစ်စဉ်လစာစတင်ပျမ်းမျှ $ $ 57,220 (အချိန်ပြည့်) သို့မဟုတ် $ 34,735 အပိုင်း (အချိန်) ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့နီဗားဒါးကဲ့သို့ထိပ်တန်းပေးဆောင်ပြည်နယ်များတအလုပ်လုပ်ချင်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းပိုပြီးတိကျတဲ့ငွေပမာဏကိုဆင်းကျဉ်းမြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်လူဦးကဒီဒေသမှာအလုပ်လုပ်ဘို့ 33% ပိုမိုသလောက်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
The Silver State Nevada is the best-paying state for physical therapists. The average physical therapist salary in Nevada reaches up to $XNUMX per year, which is approximately XNUMX% higher than the mean PTs pay. Check out the remuneration level in your state, by clicking ဒီမှာ.
Metropolitan Area ကို
မြို့ပြဧရိယာအဘို့, Las Vegas မှ is the highest paying city. Other choices are Fairbanks (Alaska), Jacksonville (Florida), Roanoke (Virginia) and McAllen-Edinburg-Mission (
ဧရိယာ name ကို
Las Vegas မှ-ပရဒိသု NV $58.60 $2,344 $10,157 $121,880
McAllen-Edinburg-မစ်ရှင် TX $53.38 $2,135 $9,253 $111,030
ရော့ VA သို့ $53.21 $2,128 $9,223 $110,680
Non-မြို့ပြဒေသများဘို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေ အထက်အရှေ့ Shore, Maryland or အနောက်မြောက် Iowa can bring you income as high as $XNUMX per annum.
အထက်အရှေ့ Shore မေရီလန်း $57.65 $2,306 $9,993 $119,920
အနောက်မြောက်အိုင်အိုဝါ $56.84 $2,274 $9,853 $118,230
အခြားအနီဗားဒါး $55.50 $2,220 $9,620 $115,440
အနိမ့် Savannah တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား $54.62 $2,185 $9,467 $113,600
Sussex ကောင်တီဝဲ $51.54 $2,062 $8,933 $107,200
မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ အောက်ပါဇယားသရုပ်ဖော်သကဲ့သို့, အကောင်းဆုံးပေးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ခ $ 95,440 တစ်နှစ် (တစ်နာရီလျှင် $ 45.88) ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ $45.88 $1,835 $7,953 $95,440
စီမံခန့်ခွဲမှုသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ $44.31 $1,773 $7,681 $92,170
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆေးတစ်လက်န်ဆောင်မှုများ $44.26 $1,771 $7,673 $92,070
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများ $44.26 $1,771 $7,673 $92,070
အလုပ်အကိုင်န်ဆောင်မှုများ $44.25 $1,770 $7,669 $92,030
ငွေကြေး: အမေရိကန်ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
သူတို့ဆရာဝန်များဖြစ်လျှင်တစ်ဦးချင်းကိုမေးမြန်းလျှင်ယခင်က, အဖြေဟုတ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကဆေးပညာဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းမှလျှောက်ထားမ။ အလုပ်အကိုင်များကိုသူတို့အခြိနျမှနျမှကြည့်ရှုနေသောလမ်းကိုပြောင်းလဲဘို့ယနေ့သို့သော်သူကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ကြောင့်ဆက်ပြောသည်တာဝန်ဝတ္တရား၏, ထိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးပြုကုသနဲ့တူပညာရှင်များပင်သစ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်နှင့်အတူအချိန်ပိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်လတ်တလောအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတက်သိမ်းထားချင်သူအသငျသညျမြားအဘို့အ, သင်သည်ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ် 2015, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအစီအစဉ်၏ဆရာဝန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ယခုကြောင်းကို သိ. စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီပရိုဂရမ်ဟာသူတို့ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်အဘို့အကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်ထားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးငါးဆယ်ပြည်နယ်များအတွက်ပေးထားကြောင်းတိကျသော, သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများအတွက်လိုင်စင်စာမေးပွဲ၌တည်၏။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအစီအစဉ်၏ဆရာဝန်ပြီးပါကပြီးနောက်, individualmay လည်းနေထိုင်ခွင့်နှင့်မိဿဟာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်ရေးကိုဆက်လက်။ ဤအသစ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူယခုနှစ် 2020 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး၏ဆရာဝန်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်ဟုထိုနှစ်တွင်အဖြစ်မှတ်သားသည်။
တစ်ဦးချင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုခုကိုအမျိုးအစားပေါ်ဆုံးဖြတ်ခင်မှာသူတို့သိလိုစေခြင်းငှါပထမဦးဆုံးအရာတစျခုကသူတို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လူတွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာရရှိဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤနှင့်အခြားဆက်စပ်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကူညီပေးနိုင်သည်ကြောင်း Credit သတင်းအချက်အလက်အွန်လိုင်း၏အတော်လေးနည်းနည်းရှိသေး၏။ ဒီအစိုးရအေဂျင်စီအလုပ်ဖော်ပြချက်, အနာဂတ်ကာလများအတွက်အလားအလာအပေါင်းတို့နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကျော်နေရာရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိငွေပမာဏကိုဖြန့်ဖြူးချိန် မှစ. အများဆုံးမှတ်သားဖွယ်တစ်ခုမှာ, သို့သော်, အလုပ်သမားနှင့်စာရင်းအင်းဗျူရိုသည်။
ကြောင်းအဆုံးရန်, မေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်ရန်, ဘယ်လောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှစ်စဉ်စေသည်သနည်း? ဒါဟာ (အဖြေ, လူတွေအလုပ်လုပ်ရသောပထဝီတည်နေရာအပါအဝင်မြောက်မြားစွာအချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးသိသိသာသာသူတို့ကိုလုပ်ကိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဆိုလိုသည်မှာအိမ်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ, အလုပ်အကိုင်အဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများနှင့် တူ။
တစ်ဦးချင်းသူတို့လုပ်နိုငျသောအလားအလာလစာအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, သူတို့သည်အလွန်တိကျမှန်ကန်လစာသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အလို့ငှာနီးကပ်စွာသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးချင်း Jacksonville, ဖလော်ရီဒါမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့ငှားရမ်းထားထားပြီးလျှင်, မိမိတို့၏နှစ်စဉ်လစာ $ 115,440 ဖွစျလိမျ့မညျဒါမှမဟုတ်သူတို့ရော့, ဗာဂျီးနီးယားမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့ရှေးခယျြလိုလျှင်, မိမိတို့၏လစာ $ 110,680 ဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးချင်းကဤအလုပ်အကိုင်သုတေသနပြုတဲ့အခါမှာသတိထားမိသူဖြစ်ရမည်ကြောင်းနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစျခုကနေရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။ များစွာသောလူကမသိစေခြင်းငှါသော်လည်း, အားကစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသ, လုပ်ငန်းခွင်ကုသ, လက်ထောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသရှိပါတယ်,
ဒါကြောင့်ထွက်သက်ကြီးရွယ်အိုများ PT, ကလေး PT, အာရုံကြော PT နှင့်။ တစ်ခုချင်းစီကို type ကိုသူတို့ပြုမူဆက်ဆံသောလူနာမှတိကျသောတာဝန်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့သုတေသနပြုဖြည့်စွက်မတိုင်မီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသလစာပေးဆောင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်ထိပ်အောင်ဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေကြသူလူတို့အဘို့ဤအအချက်များစဉ်းစားရန်ဤသို့ဖော်ပြသည်လည်းအရေးကြီးပါသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အချို့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်အလားအလာအခြားသူများထက်အများကြီးပိုမိုတောက်ပဖြစ်ကြသည်။ အရာတစျခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသူတို့ကစားသောအခန်းကဏ္ဍသူတို့လိုအပ်သောကုသမှုကိုလက်ခံရရှိလူနာအတွက်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍသောကွောငျ့, ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဤအမျိုးအစားသို့ဝငျကွီးကိုအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့အဲဒီစီးပွားနယ်ပယ်တွင်လူဦးအဖြစ်အစောပိုင်း 2020 အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသ၏ဆရာဝန်များအဖြစ်လူသိများလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒီလိုမျိုးလိုက်စားစိတ်ဝင်စားနေသောလူမျိုးနေအိမ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ, အလုပ်အကိုင်န်ဆောင်မှုအဖြစ်အခြားသူတွေအပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ချိန်ညှိချက်များကို၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ရရှိနိုင်အများအပြားအခွင့်အလမ်းများကိုရပါလိမ့်မယ်။
မြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေတည်နေရာ key ကိုပေါ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေသောလစာတစ်ဦးဆုံးဖြတ်ခြင်းအချက်ပါလျှင်နောက်ထပ်, သူတို့သိသင့်သောမြောက်မြားစွာသောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။ လူတွေကသူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်ရာအတွက်နေရာများတွင်ကောက်နဲ့ရှေးခယျြနိုငျဒီတော့ဥပမာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုအတွက်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ပြည်နယ်များအွန်လိုင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအလစာများအတွက်ပ္ပံကိုလည်းအမှန်တကယ်နှစ်စဉ်လစာ, အလုပ်ချိန်နာရီနှုန်းသည်သို့မဟုတ်မည်မျှလများကဖန်ဆင်းထားသည်ဆုံးဖြတ်ရန်ထိုအရပ်၌အများအပြားအချက်များကြောင့်အကိုအလွန်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
မှန်ကန်စွာဒီလစာတွက်ချက်ရန်, လူတစ်ဦးကိုသူတို့ (အလုပ်အကိုင်န်ဆောင်မှု vs ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှု) နှင့်တိကျသောအလုပ်ခေါင်းစဉ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအလုပ်တည်ရှိရာအဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်သိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
© XNUMX ThePhysicalTherapistSalary.com